Shiya iDomain yakho kwinto oyenzayo | Martech Zone
Shiya indawo yakho kwindawo yakho
NgoMvulo, nge-19 kaJanuwari, 2009 NgoLwesibini, Oktobha 7, 2014 Douglas Karr
Bangaphi abantu abafuna umntu owaziyo ukuba yintoni uyenza? Ngoku… bangaphi abantu abajongileyo yeyakho?
Ke… ukuba unqwenela ukufunyanwa kwi-Intanethi wento enjani uyenza, kutheni ungathenga ingama lakho njengegama lesizinda kwaye ubeke ibhlog kuyo? Usenokungafuni. Thenga igama ledomeyini elibonisa kuqala ukuba yintoni uyenza. Kude abantu bazi ukuba ungubani, yile ndlela baya kukufumana ngayo.
Xa ufumana umxholo owaneleyo kwaye ulandela, uGoogle uya kukukhathalela ukubenza bakufumane.
tags: inzondo yophawuumbono weimeyileUmbono wokuqalaumbuzo_postnentlunguyougov
Ngubani ophethe ioyile yakho?
Awudingi i-SEO yeNgcali!
Jan 19, 2009 kwi-12: 34 AM
Ingcebiso enkulu. Ndicinga ukuba ndinokuba netyala lokwenza into enye. Mhlawumbi ibikukufuna ukwakha "uphawu" lwam okanye inyani yokuba ndibone abanye abantu besenza! Indenza ndicinge kabini! Enkosi ngeposi elicelomngeni!
Ingcebiso enkulu uDoug. Esi sisiluleko sokuqala endinokukunika nabani na obeka iwebhusayithi. Umzekelo… ukuba uthengisa ipapa kunye negama lenkampani yakho linje ngokuVuna kweNdalo okanye into enjalo. Ukuthatha igama http://naturalharvest.com ingangumbono ombi ngokwenyani kumbono wentengiso. Iya kuba ibaluleke ngakumbi ukuba nayo http://popcorn.com . Ndiqinisekile ukuba zombini ezi URL zithathiwe, kodwa ufumana umbono.
Jan 19, 2009 kwi-11: 53 AM
Ndizabalazile ngale nto xa ndiqala ukubeka indawo yam kunye. Ndigqibe kwelokuba ndihambe no “What” endaweni ka “Me” kuba bendisazi ukuba andifuni ukuba ibe yindawo endiza kuphila kuyo, kodwa ibe sisibonelelo sabanye abantu. Ndicinga ukuba linyathelo elibalulekileyo kwinkqubo yocwangciso. Ingcebiso yakho ilula kwaye iyavakala ngokupheleleyo!
Jan 19, 2009 ngo-3: 58 PM
Ndiyavuma, ndiyasiqonda isizathu sokuba abantu bafune ukuthenga amagama abo, kodwa ngaphandle kokuba unegama lamandla kakade, ithini loo nto? I-URL yakho kufuneka ibonakalise ukuba loluphi uhlobo lwesiza / ibhlog yakho kwaye yintoni enokulindelwa ngabafundi.